News 18 Nepal || कोरोना भाइरस, लकडाउन, ऋणको बोझ र घरभाडा
काठमाडौं । विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले तहल्का मच्चाइरहेको छ । जसले विश्वलाई नै स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । साथै, धन र शक्तिमा घमन्ड गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरु समेत कोरोना भाइरसले तहसनहस बनेका छन् । विश्वको अर्थतन्त्र त खस्कियो-खस्कियो मानवको मनोवैज्ञानिक सोचनिय शक्तिलाई समेत दखल पुर्याउन सफल बनेको छ कोरोना भाइरस । हाल सरकारी र निजी कामकाज ठप्प छ । मानवलाई रोग, भोक र शोकले दिनरात थिचिरहेको छ ।
सरकारले गरेको लकडाउनलाई नेपाली जनताले धैर्यताका साथ आजसम्म पालना गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले राहत त बाँड्यो तर मजदुरको समस्याभन्दा पनि आफ्नै नीति नियम बनाएर बाँडेको राहतले कतिलाई आहत भयो होला र ? त्यो त हुँदा खाने गरिब र मजदुरलाई सोध्नु उपयुक्त होला । के सरकारले फेरि राहत दिन्छ त ? यो गरिब, मजदुर र विद्यार्थीको प्रश्न हो । यसको जवाफ सरकारसँग मात्र छ ।
लकडाउन भएको तीन महिना हुन थालिसकेको छ, घरबेटीलाई भाडा बुझाउने पैसाको बोझ दिन प्रतिदिन थपिरहेको छ । मजदुर, विद्यार्थी भन्छन् खै के गर्ने ? घरबेटीलाई भाडा, बत्ती र नेटको पैसा नदिऔँ रिसाउने डर, भाडा तिराैँ खाने गाँसको जोहो गर्न सकेको छैन, काम गर्न पाएको छैन, भाडा दिने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? उता घर मालिकको प्रश्न छ, कोठामा बस्नेलाई भाडा नलिए हाम्रो सम्पूर्ण ब्यवस्था सरकारले गर्छ र ?
कतिपय घर मालिकको आम्दानीको स्रोत नै घर हो, घर भाडाबाट नै सारा आर्थिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्काे कुरा, कतिपयले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन् त्यसको लागि के गर्ने त ? ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने हो त ? तर, सरकारले व्याज मिनाहको कुरा बजेत पेश गर्दा समेत गरेन । लकडाउनले दिन प्रतिदिन व्याज बढीरहँदा एकतिर बैंकले व्याज र किस्ता तिर्न भनिरहेको छ अर्को तर्फ राजश्व कार्यालयले यहि जेठ २५ गतेसम्म कर नतिरे जरिवाना लाग्ने भन्दै सूचना निकालिसकेको छ ।
सामान्य कामकाजमा पनि प्रतिबन्ध लागेका कारण धेरै व्यक्तिहरुले दुखेसो सुनाउँछन्, कैदी जीवन कहिलेसम्म बिताउने ? सबैभन्दा चुनौति त सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई छ । आफ्नो घर नहुँदाका पीडा त उनिहरुलाई थाहा होला । उनिहरुको भनाइ अनुसार जागिर गर्न नजाउँ जागिर जाला भन्ने डर, जागिर गर्न जाउँ घरबेटीको कचकच कति दिन सहने । यस कठिन घडीमा हाम्रो समस्या खै कसले बुझ्ला ?
कोरोना भाइरसका कारण शहरमा घर भएका घर मालिकहरुको पनि कम्ति पीडा त कहाँ नहोला र ? दिनरात घरमा सबै जना बस्दा हो हल्ला, त्यस्तै बत्ती, पानी र नेटको खपत त्यतिकै, उता पानी सिध्याउला, घर फोहोर गरिदेला ? बत्ती, पानी, फोहोर आदीको पैसा तिर्नुपर्छ घर भाडामा बस्नेले भाडा देलाकि-नदेला भन्ने चिन्ता नै चिन्ता छ । सरकार ! कोरोनाले भन्दा पनि हाम्रो प्राण ऋणको भारी र मानसिक चिन्ताले लिने भइसक्यो । समाधानका लागि उपाय अपनाइयोस् ।
कोरोनाविरुद्धको खोप बारे फेरि बोले पुटिन, खुलाए यस्ता रहस्य
भारतमा कोरोना संक्रमितको नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो मृतकको संख्या ?
कुन देशले कति र कहिले पाउँछ कोरोनाको भ्याक्सीन ? यसो भन्छ डब्ल्यूएचओ
असोज ०७ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
नेपालमा आज मंगलबार कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ?